Ku dhowaad 100 qoys oo Alshabaab hantidooda boobeen oo maanta Xuddur gaaray +Sawirro | SMC
Home WARARKA MAANTA Ku dhowaad 100 qoys oo Alshabaab hantidooda boobeen oo maanta Xuddur gaaray...
Ku dhowaad 100 qoys oo Alshabaab hantidooda boobeen oo maanta Xuddur gaaray +Sawirro
Wararka ka imaanaya magaalada Xuddur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegaya in maanta halkaas ay gaareen in ka badan 60 qoys oo ka soo cararey maleeshiyaadka argagaxisada Alshabaab ka dib markii xoolihii ay dhaqan jireen ay si qasab ah uga kaxeysteen kooxdaas.
Dadkan ayaa ka soo barkacay deegaanka Gubad Galloole oo qiyaastii 30km dhanka waqooyi ka xiga Xuddur, sida ay sheegeen qaar kamid ah dadkaas oo warbaahinta la hadlay.
Xero ku taala duleedka magaalada ayaa la geeyay dadkan kuwaas oo wajigooda laga dheehan karo dhibaatada ay kala kulmeen maleeshiyaadka Alshabaab.
Deegaanka dadkan ka soo kaxeen ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dagaal u dhexeeyay dhalinyaro deegaan ah oo ka dhiidhiyay dhibaatada argagaxisada iyo maleeshiyaadka nabad diidka ah ee Alshabaab.
Dadkan waxaa ay ku badan yihiin haween iyo carruur, mana ahan markii ugu horeysay oo magaalada Xuddur ay soo gaaraan dad ka soo cararay dhibaatada Alshabaab, waxaa duleedka magaaladaas ku dhaqan boqolaal qoys oo ka soo kaxey dhulka miyiga ah oo maleeshiyaadkaas ku sugan yihiin.
Previous articleDaawo Madaxweynihii hore ee koonfur galbeed oo ka hadlay damaciisa doorashada 2021
Next articleMaxkamadda ICJ oo ku dhowaad Sanad Mar kale dib u dhigtay Dacwadii xuduudka Badda ee Somaliya & Kenya